2012 October | Araweelo News Network (Archive) -
By info On Wednesday, October 31st, 2012
Washington(ANN)Ururka Midowga Afrika ayaa mar kale ka dalbaday Qaramada Midoobay in xayiraada hubka laga qaado Somalia. Sidaana waxa sheegay Wakiilka Midowga Afrika ee Qaramada Midoobay oo kulan uu la qaadatay More...
Paris(ANN)Dowladda Faransiiska ayaa si kulul u cambaareysay dilalalka iyo weerarada joogtada ka noqday ee lagu qaado Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka hawlgala gudaha dalka Soomaaliya. More...
Maxamed Xaashi Ma wuxuu u haystaa Daahir Rayaale weli in uu yahay Madaxweynihii dalka, Cawilna yahay Wasiirkii Maaliyadda. More...
Xisbul Xaakimkow Wax Toosi Inta Aanay Talo Faro Ka Haadin, Prof. Mohamed Ahmed Farah(Jaafaa)
Ma doonayo inay dad aan garan wayay ujeedadooda iga lumiyaan qoraalada maqaalada aan ku tilmaamayo dhaliisha maamulka iyo madaxda dalkayga Somaliland ee u baahan in la toosiyo inta ay dhow yihiin ee aanay xaaladu More...
Weli waxaynu ku irnaa 28kii Ogos 2012ka. Subaxnimadii hore Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa tilifoon ii soo diray. Wuxu igu yidhi arrin degdeg ah ayaa jira ee ii kaalay ama aan kuu imaaddo. Si dhiillo leh ayuu ii More...
By info On Tuesday, October 30th, 2012
Muqdisho(ANN) Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilal culus oo mihiim ah u magcaabay Prof Cali Khaliif Galaydh iyo Axmed Ismaaciil Samatar oo labaduba kasoo jeeda Somaliland, isla markaana ka mid ah More...
New york(ANN)Duufaano waaweyn ayaa hafiyay Dalka mareykanka, kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka mareykanka. kadib markii ay duufaanka iyo dabaylaha xawaaraha ku soconayaa maalmo ka hor waxyeelo ka More...
Ciidanka Booliska Somaliland Oo Soo Bandhigay Boqolaal Qoryaha Hoobiyaha Loo Yaqaan Oo Laga Helay Boorama
Hargeysa(ANN) Ciidanka Booliska Somaliland ayaa gacanta ku dhigay Hub xaddi badan oo nooca loo yaqaan Hoobiyaha, miinooyin iyo qalab kale oo laga helay guri ku yaal magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. More...
Magacaabistaydii iyo maagistaydii: Laba Isku Lamaanaa Qormadii: 18aad Boobe Yuusuf Ducaale
Waxaan jecelahay in yar oo aan idiin soo sheeko-dhaafay in aan dib ugu noqdo. Maalintaa ay taariikhdu ahayd 27kii Ogos ee aan qoray warqaddii aan ku beddelay labadii Agaasime-waaxeed, sidii dhaqankooduba ahaa More...
By info On Monday, October 29th, 2012
Magacaabistaydii iyo maagistaydii: Laba Isku Lamaanaa Qormadii: 17aad Boobe Yuusuf Ducaale
Madaxweynuhu wuxu la soo fadhiistay laba warqadood oo gacan ku qornaa, muraayadahii indhahana waa uu xidhnaa. Waxaan is-leeyahay warqaddu khad cas ayay ku qornayd, qalinna waa uu haystay, sidanna waxa u dhacay More...